နေအိမ် | COSCO
အပြင်ဘက်တွင်စိတ်ကြိုက်ခေါက်ထားနိုင်သောလှောင်ပိတ်တဲ 3x3 4x4 5x5 6x6 7x7
အရည်အသွေးမြင့်မားသောပြင်ပတဲ၊ ပြင်ပမိုးမျှော်များ၊ JIANGMEN COSCO SHIPPING ALUMINIUM CO ။ , LTD ။ အပြင်ဘက်တွင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသောခေါက်သိမ်းဆည်းထားသောတဲတဲ 3x3 4x4 5x5 6x6 7x7 https://coscotent.com
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သွယ်မှုပြပွဲ marquee တဲ gazebo
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ်အပျက်ပါတီပွဲ၊ pvc ပါတီတဲထုတ်လုပ်ခြင်း၊ COSCO လူမီနီယံတဲတွင်အထူးပြု၊ ကိုးကားပါ။ https://coscotent.com marquee တဲ gazebo ခေါက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သွယ်မှုပြပွဲ
မြှင့်တင်ရေးဖြစ်ရပ်အခမဲ့ဒီဇိုင်းထုံးစံမြတ်သောတဲ gazebo တဲ
ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ! အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ အလူမီနီယံအဖြစ်အပျက်တဲ၊ မင်္ဂလာဆောင်ဈေးနှုန်း၊ အမိုးခုံးတဲ့ | COSCO ပွဲတော်တဲတွင်အမိုးခုံးတဲ။ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဖြစ်ရပ်အခမဲ့ဒီဇိုင်းထုံးစံမြတ်သော gazebo တဲ https://coscotent.com
အချက်အလက်ရယူ! အသေးစိတ်အချက်အလက်များအမိုးခုံးတဲစျေး၊ ပွဲတဲစျေး၊ မင်္ဂလာဆောင်တဲစျေးနှုန်း | COSCO ပွဲတဲ၌တံစို့နှင့်တိုင်တံ။ အကောင်းဆုံးအပြင်ဘက်တွင်စျေးပေါသောအဖြူရောင်လူမီနီယံဘုရားစေတီအဖြစ်အပျက်တဲကို https://coscotent.com